Orinasa mpiambina afo - Mpanamboatra sakana ao Shina, mpamatsy
Sora-baoritra tsy mirehitra (modely: dc-a2-cd08)
dc-a2-cd08 fireproof famehezana plate plate is a new type of fireproof material develop by our company, izay tsy misy fofona, tsy misy halogen, miaraka amin'ny toetr'andro tsara fanoherana, setroka setroka ary tery ny rivotra. Ampiasaina betsaka amin'ny herinaratra nokleary, fifandraisan-davitra herinaratra, metallurgy ary indostrialy petrochemical. Satria tsotra ny fanamboarana, noho izany dia afaka mamonjy herin'olombelona sy mampihena ny vidiny. Izy io dia mety indrindra amin'ny fanoloana tariby matetika amin'ny faritra lehibe amin'ny vatana.
Dc-a1-cd04 inorganic fireblock dia antsoina koa hoe barazy na takelaka afo tsy mety may. Ity tabilao ity dia vita amin'ny fitaovana tsy mora may amin'ny alàlan'ny fametrahana siantifika sy fanerena. Izy io dia manana fahombiazan'ny faharetan'ny lelafo, ora tsy fandoroana mihoatra ny 3 ora raha misy afo, tanjaka mekanika avo, tsy fipoahana, fanoherana rano sy solika, fanoherana ny harafesin'ny simika, tsy misy poizina ary toetra hafa. Amin'ny fitsapana ny dc-a1-cd04 sakana tsy an-kibon'ny tany, ny mari-pana amin'ny lelafo tsara indrindra dia 1000 ℃ tsy misy fihoarana, ny index rehetra dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny gb23864-2009, ary ny fahombiazan'ny fandoroana dia mahatratra ny fenitra (tsy maha-mivalona) voalaza ao amin'ny GB / t2408 -2008. Dc-a1-cd04 sakana tsy an-jorom-bolo dia mihatra indrindra amin'ny fiarovana afo sy ny fisarahana afo amin'ny tariby misy haavo isan-karazany rehefa apetraka amin'ny bracket na tetezana. , toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany sy toerana hafa misy tariby any Shina.
Module fijanonana afo
Dm-a3-cd05 modely mpamono afo dia vita amin'ny fitaovana fanitarana afo maharitra tsy misy poizina ary fizotra manokana. Ampiasaina indrindra amin'ny fametahana tariby, tariby ary fitaovana elektrika amin'ny herinaratra, fifandraisana, metallurgy, petrochemical ary indostria hafa.